Date: 02 juin 2017 - 16:11
Manao ahoana daholo tompoko
Sao mba misy mahita fianarana mahandro, patisserie ety aamin'ny manodidina an' Mahamasina, Anosy, Ampefiloha, Andrefan'Ambohijanahary azafady?
Efa tany amin' Andro (akaikin' ny fasan-dRainiharo) fa tsy nety ilay ora hianarana, ny azy maraina fona nefa za ny apres midi no afaka
Re: Fianarana mahandro
Date: 06 juin 2017 - 16:49
- MDF, ao ambadiky ny fianarandry masera ampitan'ny katolika isoraka.
- INSTITUTION MARTHE HERVE, 67ha
- Accem andohan'Analakely tsy haiko na manao na tsia
Somary lavitra kely fa tsy haiko raha mety @nao
- MCP Antaninandro
- eo akaikin'ny ERD Behoririka (tsy haiko raha mbola manao) eo ampitan'ny galana dia mijery plaque @ ireo trano amoron'arabe ireo.
RHAL PRODUCTION koa mitety an'ny falda Antanimena, sy ilay fianarana (technique) ao Mahamasina ary rasalama rehefa asambotsy fa mila mijery gazety na TV.
Date: 08 juin 2017 - 09:24
tigato : misaotra betsaka, miala tsiny fa zao vao afaka namaly teto, ande ho jerena ireo de hita eo zay mety, dia mamerina ny fisaorana indray
Date: 09 juin 2017 - 13:39
INTH Ampefiloha (complexe scolaire) koa misy fa adinoko no nametraka azy teo ambony.